Isitudiyo sokujonga izibuko laseAkaroa, sicocekile kwaye sicocekile
Indlu engasemva yonke sinombuki zindwendwe onguCharlotte
Isitudiyo sokujonga izibuko laseAkaroa yindawo ekhanyayo, eqaqambileyo kwaye epholileyo. Isitudiyo sonwabela iimbono ezingaphazamisekiyo zezibuko elihle laseAkaroa ngaphakathi nangaphakathi kumgangatho wabucala. Uya kuziva ukhululekile kwaye usekhaya kunye nebhedi yokumkanikazi epholileyo, indawo yokuhlala kunye nekhitshi elimiswe kakuhle. Isitudiyo simizuzu emi-5 yokuqhuba, okanye uhambo olumnandi lwemizuzu engama-20 ecaleni kwendlela yaselwandle ukuya kumbindi weAkaroa. I-studio nayo inegumbi lokulala elineebhanti kwaye iya kuhambelana nezibini okanye iintsapho ezine-1 okanye i-2 yabantwana abancinci.
Isitudiyo sokujonga izibuko iAkaroa sisandula ukulungiswa kwaye sinikwe incasa. Indawo inegumbi eliphambili elinebhedi ekhululekileyo yokumkanikazi kunye nomqhaphu othandekayo othambileyo kunye neebhedi zelinen. Kukwakho nendawo yokuhlala, enesofa entsha kunye nezihlalo zengalo apho uya kukwazi ukuhlala kwaye ucwangcise usuku lwakho, okanye uphumle ngokuhlwa. Ikhitshi libekwe kakuhle, linezixhobo zombane ezibandakanya i-oveni ephezu kwetafile, isitovu esiphathwayo sokungenisa izinto, izinto zokusika kunye nezixhobo zokupheka ukuze uzive usekhaya. I-studio inomshini wekhofi we-nespresso, kuba ikhofi elungileyo ibalulekile, ngakumbi xa useholideyini. Indawo ikhokelela kwidesika enesisa enetafile yokutyela kunye nezitulo kunye ne-BBQ ukuze ukwazi ukupheka kunye nokutya ngaphandle wenze owona mbono umangalisayo. Isitudiyo sokujonga izibuko laseAkaroa sinegumbi lokuhlambela elahlukileyo elineshawa enamandla. Kukho iitawuli ezithandekayo ezimhlophe, ishampu kunye nesepha, kunye nesomisi seenwele. I-studio inegumbi lokulala elahlukileyo elineebhedi ze-bunk ezifanelekileyo kumntwana omnye okanye ababini abancinci.
- Kutsha nje ukulungiswa
-Ibhedi etofotofo kakhulu enomqhaphu othambileyo kunye nelinen yokulala
- Iitawuli ezimhlophe ezishushu
-I-wifi yasimahla kunye neTV eneNetflix yasimahla
- Igumbi lokuhlambela elineshampu kunye nesepha, kunye nesomisi seenwele
-Ikhitshi ene-oveni ye-countertop, isitovu esiphathwayo, ifriji/isikhenkcezisi, iketile, itoasta, iimbiza neepani, i-cutlery kunye nesitya
5.0 ·Izimvo eziyi-203
Isitudiyo sokujonga izibuko laseAkaroa yimizuzu emi-5 yokuqhuba okanye ukuhamba ngemizuzu eyi-15-20 ukuya kumbindi we-Akaroa. Siyayithanda indlela yokuhamba - iya kukuhlisa kwindlela yokuhamba kawonke-wonke edlula kwilitye lesikhumbuzo laseBritomart ukuya kwiGlen Bay enoxolo, apho kukho ulwandle olunamatye oluyindawo esiyithandayo yokuqubha kunye ne-kayak ngexesha leenyanga zasehlotyeni. Ukusuka apho, kukuhamba okumnandi ecaleni kwendlela elunxwemeni ngaphaya kwendlu yesibane yembali yaseAkaroa ukuya edolophini. Isitudiyo sokujonga izibuko i-Akaroa siziva sisondele ngokwaneleyo kuzo zonke izenzo, kodwa sizolile kwaye sibucala kwaye sonwabela umbono ongaphazamisekiyo wezibuko elihle laseAkaroa kunye neenduli ezingqongileyo.
I-Akaroa imalunga ne-1.5 yeeyure zokuhamba ukusuka eChristchurch.
Istudiyo simi ecaleni kwendlu yethu, kodwa sibucala sinesango laso lokungena kunye neendawo zokupaka ngaphandle kwesitalato. Siya kuba sestudio ukuze sikubulise ngokobuqu xa ufika, okanye izitshixo ziya kufumaneka kwibhokisi yokutshixa kwaye siya kukuthumelela ikhowudi ngaphambi kokuba ufike. Siyabuhlonipha ubumfihlo bakho, kodwa ukuba unemibuzo okanye ungathanda uncedo, sikutsalele umnxeba nje.
Istudiyo simi ecaleni kwendlu yethu, kodwa sibucala sinesango laso lokungena kunye neendawo zokupaka ngaphandle kwesitalato. Siya kuba sestudio ukuze sikubulise ngokobuqu xa ufika,…